असार १० गते नेपाल बन्द !::News from Nepal
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना कार्यकर्ता हत्याको विरोधमा असार १० गते नेपाल बन्द घोषणा गरेको छ । हिजो मात्रै सर्लाहीमा नेकपा कार्यकर्र्ता कुमार पौडेलको प्रहरीको गोली लागी ज्यान गएपछि आक्रोसित भएको उक्त पार्टीले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
आफ्नो पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या भएपछि नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका महासचिव विप्लवले नेपाल बन्दसहितका चार दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार ७ गते प्रचार प्रसार, ८ गते कोणसभा तथा घरदैलो, ९ गते मसाल जुलुस र १० गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
देशमा गम्भिर राजनितिक अनिष्टको संकेत !अब के होला र?
दुइ तिहाइको शक्तिशाली बहुमतको सरकार भन्दै जनताले निकै ठुलो आशा राखेका थिए । तर विस्तारै सरकारप्रतिको आशक्ति विस्तार हट्दै गएको देखिन्छ । भित्रभित्र्र गम्भिर खालका चलखेल र षड्यन्त्रको रिहलर्सल चलिरहेको छ । पछिल्लो समय शिर्ष नेतामा देखिएको संवादहिनता चरम राजनितिक खिचातानीका कारण गम्भिर राजतिनित अनिष्टको अवस्था आउँन लागेको छ ।
अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री डा। सशांक कोइराला लगायत नेताहरुसंग बाक्लो भेटघाट भैरहेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री ओली सशंकित भएका छन् । उनले यी दुई विषय उठाएर प्रचण्डमाथि एक्सन लिनसक्ने बताइएको छ ।
आशा गरेका जनता नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र खिचातानीका कारण दिक्क भएका छन् । राजावादी देखि अतिवादी सम्मको चलेखेल एकै पटक बढेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयमंले आज भोली पटक पटक निराशा बोलिरहेका छन् । देशको शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री नै सचिवले धोका दिए ढाँटे अनि काम गर्न सकिएन जस्ता हलुवा कुरा गरेर उम्कन खोज्ने बाटो खोज्दै छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार केपी सरकारलाई नागरिक स्तर बाट जतिसक्दो अलोकप्रिय बनाउँने र त्यसैमा खेलेर सरकार ढाल्ने सम्मको खेलमा देशि विदेशी शक्ति केन्द्रहरु दिन रात लागिरहेका छन् ।
शक्तिकेन्द्रहरुको ध्यान जसरी भएपनि सत्तारुढ नेकपामा खेल्ने र राजननितिक अस्थिरताको व्यापार गर्ने भन्ने नै बुझिएको छ । शक्तिकेन्द्रहरुले कहिले प्रचण्ड , कहिले बामदेव त कहिले भिम रावल कार्ड प्रयोग गरेर नेकपा भित्र खेलिरहेको छ । पछिल्लो राजिनतिक वातावरणबाट वाक्क भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै कठोर कदम चाल्न सक्ने आकलन वास्तविकताको नजिक छ । फेरी पनि देश अस्थिरता र खिचातानीको बाटोमा गयो भने यसले गम्भिर मूल्य चुकाउँनु पर्ने निश्चित छ ।